Shuruudaha Isticmaalka - Baaskiilka
Shuruudahan iyo shuruudaha soo socdaa waxay xukumaan dhammaan isticmaalka websaydka bikehike.org iyo dhammaan waxyaabaha ku jira, adeegyada iyo badeecadaha laga heli karo mareegaha (lagu daray, Website-ka). Mareegta waxaa iska leh oo ay maamusho baaskiilka ("bikehike"). Website-ka waxa la bixiyaa iyada oo ku xidhan aqbalaaddaada iyada oo aan wax laga beddelin dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha halkan ku jira iyo dhammaan shuruucda kale ee hawlgalka, siyaasadaha (ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, Siyaasadda Khaaska ah ee baaskiilka) iyo nidaamyada laga yaabo in lagu daabaco wakhti ka waqti goobtan baaskiilka (wadajir, "Heshiiska").
Fadlan si taxadar leh u akhri heshiiskan ka hor inta aanad galin ama isticmaalin Website-ka. Markaad gasho ama adeegsato qayb kasta oo ka mid ah mareegaha, waxaad ogolaatay inaad ku xidhnaato shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan. Haddii aadan ku raacsanayn dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiska, markaa ma geli kartid Website-ka ama ma isticmaali kartid adeeg kasta. Haddii shuruudahan iyo shuruudahan loo tixgaliyo bixinta baaskiilka, aqbalaadda waxay si cad u xaddidan tahay shuruudahan. Websaydhku waxa heli kara oo keliya shakhsiyaadka da'doodu tahay 13 sano.
Koontadaada bikehike.org iyo Goobta. Haddii aad ka samaysato blog/site mareegaha, adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta amniga akoonkaaga iyo balooggaga, waxaana aad si buuxda mas'uul uga tahay dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka dhaca koontada hoosteeda iyo ficil kasta oo kale oo lala xiriirinayo blog-ka. Waa inaadan ku sifayn ama aadan ku meelayn ereyada muhiimka ah ee bloggaaga si marin habaabin ah ama qaab sharci darro ah, oo ay ku jiraan qaab loogu talagalay in lagu ganacsado magaca ama sumcadda dadka kale, iyo baaskiil wadiddu waxay beddeli kartaa ama ka saari kartaa sharraxaad kasta ama kelmad kasta oo ay u aragto mid aan habboonayn ama sharci darro ah, ama haddii kale waxay u badan tahay inay sababto mas'uuliyadda baaskiil wadista. Waa inaad isla markiiba ogeysiisaa baaskiilka isticmaalka aan la ogolayn ee bloggaaga, akoonkaaga ama wax kasta oo amniga jebiya. baaskiilka mas'uul kama noqon doono ficil kasta ama gafitaankaada, oo ay ku jiraan wax kasta oo waxyeelo ah nooc kasta oo ka mid ah natiijada falalkaas ama ka tegista.
Waajibaadka Ka-qaybgalayaasha. Haddii aad ku shaqeyso baloog, faallo ka bixi baloog, ku dheji walxaha Websaydhka, ku dheji xiriiriyeyaasha Website-ka, ama haddii kale samee (ama u oggolow qolo kasta oo saddexaad inay sameeyaan) walxo la heli karo iyada oo loo marayo Website-ka (wax kasta oo noocaas ah, "Content" ), Adiga ayaa gabi ahaanba mas'uul ka ah waxa ku jira, iyo waxyeelo kasta oo ka dhalata, waxa ku jira. Taasi waa kiiska iyada oo aan loo eegin in nuxurka su'aashu ay ka kooban tahay qoraal, garaafyo, faylal maqal ah, ama software kombuyuutar ah. Adigoo ka dhigaya nuxurka la heli karo, waxaad matalaysaa oo aad dammaanad qaadaysaa in: soo dejinta, koobiyaynta iyo adeegsiga Mawduuca aanay ku xad-gudbi doonin xuquuqaha lahaanshaha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xuquuqda daabacaadda, patentka, summadda ganacsiga ama xuquuqaha sirta ganacsiga, cid kasta oo saddexaad;
mareegtadaada looma magacaabin hab marin habaabineysa akhristayaashaada oo u maleynaya inaad tahay qof kale ama shirkad. Tusaale ahaan, URL-kaaga ama magacaaga mareegtu ma aha magac qof aan adiga ahayn ama shirkad aan ahayn kanaga; iyo
waxaad haysataa, marka laga hadlayo Mawduuca ay ku jiraan koodka kombayutarka, si sax ah loo kala saaray iyo/ama lagu sifeeyay nooca, dabeecadda, isticmaalka iyo saamaynta alaabta, haddii lagu codsado baaskiil-wad ama si kale.
Markaad u soo gudbiso nuxurka baaskiilka si loogu daro mareegahaaga, waxaad siisaa baaskiilka shatiga aduunka oo dhan, royalty-free, iyo mid aan gaar ahayn si loo soo saaro, wax ka beddelo, ula qabsado oo loo daabaco nuxurka oo kaliya ujeedada muujinta, qaybinta iyo horumarinta bloggaaga . Haddii aad tirtirto nuxurka, baaskiilku wuxuu isticmaali doonaa dadaallo macquul ah si looga saaro Website-ka, laakiin waxaad qiraysaa in kaydinta ama tixraacyada Mawduuca aan la samayn karin isla markiiba lama heli karo.
Iyadoo aan la xaddidin mid ka mid ah wakiilladaas ama dammaanadahaas, baaskiilku wuxuu xaq u leeyahay (in kasta oo aan waajib ahayn) inuu, ikhtiyaarka baaskiilka (i) diido ama ka saaro wax kasta oo ka kooban, ra'yiga macquulka ah ee baaskiilka, jebiya siyaasad kasta oo baaskiil wadista ama si kasta oo ay tahay waxyeello u leh. ama la diidi karo, ama (ii) joojiyo ama diido gelitaanka iyo isticmaalka Mareegta shakhsi kasta ama cid kasta sabab kasta ha noqotee, ikhtiyaarka baaskiilka. baaskiilka wax mas'uul ah kama yeelan doono inuu bixiyo lacag celin wixii lacag ah oo hore loo bixiyay.
Lacag bixinta iyo Cusboonaysiinta. Shuruudaha Guud.
Adiga oo dooranaya badeecad ama adeeg, waxaad ogolaatay inaad bixiso baaskiil wadista hal mar iyo/ama bille ama kharashyada isdiiwaangelinta sannadlaha ah ee la tilmaamay (shuruudaha lacag bixinta dheeraadka ah ayaa lagu dari karaa isgaarsiin kale). Lacagaha is-diiwaangelinta waxa lagu dalaci doonaa lacag-bixin horudhac ah maalinta aad is-diiwaangeliso Upgrade waxayna dabooli doontaa isticmaalka adeeggaas muddada is-diiwaangelinta billaha ah ama sannadlaha ah sida lagu tilmaamay. Lacag bixinta lama soo celin karo.
Ilaa aad ogaysiiso baaskiilka ka hor dhamaadka wakhtiga isdiiwaangelinta ee lagu dabaqi karo inaad rabto inaad tirtirto is-diiwaangelinta, ka-mid noqoshadaada si toos ah ayay u cusboonaysiin doontaa oo waxaad noo ogolaataa inaan qaadno kharashka is-diiwaangelinta sannadlaha ah ama bilaha ah ee is-diiwaangelintan (iyo sidoo kale cashuur kasta) adigoo isticmaalaya kaarka deynta ama habka kale ee lacag bixinta ee aan kuugu hayno diiwaanka. Dib u cusboonaysiinta waa la tirtiri karaa wakhti kasta adiga oo soo gudbiya codsigaga baaskiil wadida qoraal ahaan.
Adeegyada Khidmadaha; Lacag bixinta Markaad iska diiwaangeliso koontada Adeegyada waxaad ogolaatay inaad bixiso baaskiil-waynta kharashyada dejinta iyo kharashyada soo noqnoqda. Kharashaadka khuseeya waxa la soo dalacsiin doonaa laga bilaabo maalinta adeegyadaada la aasaasay iyo ka hor isticmaalka adeegyadaada. baaskiilku wuxuu xaq u leeyahay inuu beddelo shuruudaha lacag bixinta soddon (30) maalmood ka hor ogeysiis qoraal ah oo adiga kugu saabsan. Adeegyada waxa aad tirtiri kartaa wakhti kasta soddon (30) maalmood gudahood ogaysiis qoraal ah oo ku socda baaskiil wadida.
Taageero. Haddii adeeggaagu uu ku jiro gelitaanka taageerada iimaylka mudnaanta leh. "Taageerada iimaylka" macneheedu waa awooda lagu samayn karo codsiyada taageerada farsamada ee iimaylka wakhti kasta (iyada oo la raacayo dadaal macquul ah oo baaskiil lagu wado in laga jawaabo hal maalin shaqo gudaheed) ee khuseeya isticmaalka Adeegyada VIP. "Mudnaanta" macnaheedu waa in taageerada ay mudnaanta siiso taageerada isticmaaleyaasha adeegyada caadiga ah ama bikehike.org ee bilaashka ah. Dhammaan taageerada waxaa lagu bixin doonaa si waafaqsan hab-dhaqannada, nidaamyada iyo siyaasadaha adeegyada caadiga ah ee baaskiil-wadaha.
Mas'uuliyadda Booqdayaasha Mareegta. baaskiilka dib looma eegin, mana dib u eegi karo, dhammaan agabka, oo ay ku jiraan software-ka kombuyuutarka, ee lagu dhejiyay Website-ka, oo sidaas darteed mas'uul kama noqon karto waxa ku jira walxahaas, isticmaalka ama saamaynta. Ka shaqaynta Mareegaha, baaskiilku ma matalo ama ma maldahdo in ay taageerto walxaha halkaas lagu dhejiyay, ama in ay aaminsan tahay in walxahaas ay yihiin kuwo sax ah, faa'iido leh ama aan waxyeello lahayn. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad taxaddar sameyso marka loo baahdo si aad naftaada iyo nidaamyada kombiyuutarka uga ilaaliso fayrasyada, Gooryaanka, Fardaha Trojans, iyo waxyaabaha kale ee waxyeelada leh ama wax burburinaya. Websaydhku waxa ku jiri kara waxyaabo gaf ah, anshax-darro ah, ama haddii kale la diidi karo, iyo sidoo kale macluumaad ka kooban khaladaad farsamo, khaladaad qoraaleed, iyo khaladaad kale. Websaydhku waxa kale oo ku jiri kara shay ku xad-gudbaya sirta ama xuquuqaha dacaayaddeed, ama ku xad-gudbinaya hantida aqooneed iyo xuquuqaha kale ee lahaanshaha, qolo saddexaad, ama soo dejinta, koobiyeynta ama isticmaalka kuwaas oo ku xidhan shuruudo iyo shuruudo dheeraad ah, la sheegay ama aan la sheegin. baaskiilku wuxuu iska fogeeyaa mas'uuliyad kasta oo waxyeello ah oo ka timaadda isticmaalka booqdayaasha Mareegaha, ama wax kasta oo ay soo dajiyaan kuwa booqdayaasha macluumaadka halkaas lagu dhejiyay.
Nuxurka Lagu Soo Bandhigay Mareegaha Kale Ma aanan eegin, oo dib u eegi karin, dhammaan agabka, oo ay ku jiraan software-ka kombayutarka, ee laga helay mareegaha iyo boggaga internetka ee ay bikehike.org ku xidho, iyo xidhiidhka bikehike.org. baaskiilku wax xakameyn ah kuma laha mareegaha aan baaskiilka lahayn iyo boggaga internetka, mas'uul kama aha waxa ku jira ama isticmaalkooda. Ku xidhidhinta degelka aan baaskiilka lahayn ama bogga internetka, baaskiilku ma matalo ama ma maldahdo in ay taageerto mareegahaas ama bogga internetka. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad taxaddar sameyso marka loo baahdo si aad naftaada iyo nidaamyada kombiyuutarka uga ilaaliso fayrasyada, Gooryaanka, Fardaha Trojans, iyo waxyaabaha kale ee waxyeelada leh ama wax burburinaya. baaskiilku wuxuu iska fogeeyaa mas'uuliyadda waxyeello kasta oo ka dhalata isticmaalkaaga mareegaha iyo boggaga internetka ee aan baaskiilka ahayn.
Ku Xad-gudubka Xuquuqda Daabacaadda iyo Siyaasadda DMCA. Sida baaskiilku u weydiiyo dadka kale inay ixtiraamaan xuquuqdeeda lahaanshaha garaadka, waxay ixtiraamaysaa xuquuqda lahaanshaha garaadka dadka kale. Haddii aad aamminsan tahay in walxaha ku yaal ama ku xidhan bikehike.org ay ku xad-gudbinayaan xuquuqdaada daabacaadda, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad ogeysiiso baaskiilka sida uu qabo Xeerka Xuquuqda Daabacaadda Millennium Digital ("DMCA") ee bikehike. baaskiil-waynta waxay ka jawaabi doontaa dhammaan ogeysiisyada noocaas ah, oo ay ku jiraan sida loo baahan yahay ama ku habboon iyada oo meesha ka saaraysa walxaha xad-gudbinaya ama curyaamin doona dhammaan xiriirada walxaha xadgudubka. baaskiilku wuxuu joojin doonaa gelitaanka booqde iyo isticmaalka Mareegta haddii, xaaladaha ku habboon, booqdaha waxaa la go'aamiyay inuu noqdo ku-xadgudub ku ah xuquuqda daabacaadda ama xuquuqaha kale ee hantida aqooneed ee baaskiilka ama kuwa kale. Marka laga hadlayo joojinta noocaan oo kale ah, baaskiil wadiddu ma yeelan doonto wax waajib ah inay bixiso lacag kasta oo hore loogu bixiyay baaskiil wadista.
Hantida aqooneed. Heshiiskani kama wareejinayo baaskiil-waynta adiga ama baaskiilka cid saddexaad, iyo dhammaan xuquuqaha, lahaanshaha iyo xiisaha iyo hantidaas waxay ahaan doonaan (sida u dhaxaysa dhinacyada) oo keliya baaskiil wadida. bikehike, bikehike.org, summada bikehike.org, iyo dhammaan calaamadaha ganacsiga, calamadaha adeegga, sawirada iyo calaamadaha loo isticmaalo xidhiidhka bikehike.org, ama Website-ku waa calaamado ganacsi ama calaamado ganacsi oo diiwaangashan ee shati bixiyaasha baaskiilka ama baaskiilka. Calaamadaha kale ee ganacsiga, calamadaha adeegga, garaafyada iyo summada loo isticmaalo ee la xidhiidha mareegaha waxay noqon karaan calaamadaha ganacsiga ee dhinacyada kale ee saddexaad. Isticmaalkaga Mareegta ma ku siinayso wax xuquuq ah ama shati aad ku soo saari karto ama si kale u isticmaali karto baaskiil ama calaamado ganacsi oo dhinac saddexaad ah.
Xayeysiisyada. baaskiilku wuxuu xaq u leeyahay inuu ku soo bandhigo xayaysiisyada blogkaaga ilaa aad iibsatay akoon aan xayeysiis lahayn.
Sifada. baaskiil-waynta waxa ay xaq u leedahay in ay muujiso isku-xidhaha sifaynta sida 'Blog at bikehike.org,' qoraaga mawduuca, iyo astaanta font ee boggaaga blog-ka ama aaladda.
Alaabta Wadaagga. Markaad ka hawlgeliso badeecada shuraakada (tusaale dulucda) mid ka mid ah shuraakadayada, waxaad ogolaatay shuruudaha adeegga lammaanahaas. Waxaad ka bixi kartaa shuruudaha adeeggooda wakhti kasta adiga oo damiya badeecada lammaanaha.
Magacyada Domain Haddii aad diiwaangelinayso magac domain, addoo isticmaalaya ama wareejinaya magac domain hore u diwaan gashanaa, waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay in isticmaalka magaca domain uu sidoo kale hoos yimaado siyaasadaha Shirkadda Internetka ee Magacyada iyo Nambarada loo qoondeeyay ("ICANN"), oo ay ku jiraan Xuquuqda iyo Waajibaadka Diiwaangelinta.
Isbeddellada baaskiilku wuxuu xaq u leeyahay, go'aankiisa oo keliya, inuu wax ka beddelo ama beddelo qayb ka mid ah heshiiskan. Waa mas'uuliyaddaada inaad hubiso heshiiskan si xilliyo ah isbedelada. Isticmaalkaaga joogtada ah ama gelitaanka shabakada ka dib dhajinta isbeddel kasta oo ku yimaada heshiiskan ayaa ka dhigan aqbalaada isbeddelladaas. baaskiilku waxa kale oo laga yaabaa, mustaqbalka, inuu bixiyo adeegyo cusub iyo/ama sifooyin iyada oo loo marayo Mareegta (oo ay ku jiraan, sii deynta qalab cusub iyo agab). Tilmaamaha cusub iyo/ama adeegyada noocan oo kale ah waa in ay hoos yimaadaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan.
Joojinta baaskiilku wuxuu joojin karaa gelitaankaaga dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah Website-ka wakhti kasta, sabab la'aan ama sabab la'aan, ogeysiis la'aan ama ogeysiis la'aan, isla markiiba waxtar leh. Haddii aad rabto inaad joojiso heshiiskan ama xisaabtaada bikehike.org (haddii aad mid leedahay), waxaad si fudud u joojin kartaa isticmaalka Website-ka. Si kastaba ha ahaatee arrimaha kor ku xusan, haddii aad leedahay koontada adeegyada lacag bixinta, xisaabtan kaliya waxaa lagu joojin karaa baaskiil wadid haddii aad si dhab ah u jebiso heshiiskan oo aad ku guul dareysato in aad daawato jebintaas soddon (30) maalmood gudahooda laga bilaabo ogeysiiska baaskiilka ee adiga; waase haddii, baaskiilku isla markiiba joojin karo Mareegta iyada oo qayb ka ah xidhitaanka guud ee adeegeena. Dhammaan qodobbada heshiiskan oo dabeecaddooda ay tahay inay ku badbaadaan joojinta waa inay ka badbaadaan joojinta, oo ay ku jiraan, xaddid la'aan, bixinta lahaanshaha, afeefyada dammaanadda, magdhowga iyo xaddidnaanta mas'uuliyadda.
Afeefta Damaanadqaadyada. Mareegta waxaa la bixiyaa "sida ay tahay". baaskiilka iyo alaab-qeybiyeyaasheeda iyo shati bixiyeyaashu waxay halkan ku diidayaan dhammaan dammaanadaha nooc kasta ah, la caddeeyey ama si maldahan, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, dammaanadaha ganacsiga, u qalmida ujeedo gaar ah iyo xad-gudub la'aan. Midkoodna baaskiil-wadaha ama alaab-qeybiyeyaasha iyo shati bixiyaasha, ma sameeyaan wax dammaanad ah in Websaydhku uu noqon doono mid khalad ah ama in gelitaankaas ay noqon doonto mid joogto ah ama aan kala go' lahayn. Waxaad fahamsan tahay inaad ka soo dejisanayso, ama haddii kale aad ka hesho macluumaad ama adeegyo, mareegaha go'aankaaga iyo khatartaada.
Xaddidaadda Masuuliyadda. Marnaba baaskiil ma fuuli doono, ama alaab-qeybiyeyaasheeda ama shati-bixiyeyaashu, laguma mas'uul noqon doono mawduuc kasta oo heshiiskan hoos yimaada qandaraas kasta, dayacaad, mas'uuliyad adag ama aragti kale oo sharci ama sinnaan ah: (i) Wixii khasaare gaar ah, shil ah ama cawaaqib leh; (ii) kharashka wax iibsiga ee alaabta ama adeegyada beddelka; (iii) joojinta isticmaalka ama luminta ama musuqmaasuqa xogta; ama (iv) kharash kasta oo ka badan khidmadaha aad ku bixisay baaskiil wadista sida waafaqsan heshiiskan muddada laba iyo tobanka (12) bilood ee ka hor sababta falka. baaskiil-wadaha ma yeelan doono mas'uuliyad guuldarro kasta ama dib u dhac kasta oo ay ugu wacan tahay arrimo ka baxsan xakamayntooda macquulka ah. Qodobada hore laguma dabaqi doono ilaa xadka uu mamnuucayo sharciga khuseeya.
Wakiilada Guud iyo Damaanada Waxaad matalaysaa oo aad dammaanad qaadaysaa in (i) isticmaalkaaga mareegaha uu si adag u raacayo Siyaasadda Qarsoonnimada baaskiilka, heshiiskan iyo dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo (oo ay ku jiraan xad la'aan shuruuc ama xeerar maxalli ah oo dalkaaga ah, gobolka, magaalada , ama aag kale oo dawladeed, oo ku saabsan hab-dhaqanka khadka iyo macluumaadka la aqbali karo, oo ay ku jiraan dhammaan sharciyada lagu dabaqi karo ee ku saabsan gudbinta xogta farsamada ee laga dhoofiyo Maraykanka ama waddanka aad degan tahay) iyo (ii) isticmaalkaaga mareegaha ma jebin doono ama ku takrifalka xuquuqda hantida garaadka qolo kasta.
Magdhawga. Waxaad ogolaatay inaad magdhow siiso oo aad hayso baaskiil aan dhib lahayn, qandaraaslayaasheeda, iyo shati bixiyaasheeda, iyo agaasimayaashooda, saraakiisha, shaqaalaha iyo wakiilada ka soo horjeeda iyo dhammaan sheegashooyinka iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareennada, ee ka dhasha isticmaalkaaga Website-ka. oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn jebintaada heshiiskan.
Kala duwan Heshiiskani waxa uu ka kooban yahay dhammaan heshiiska u dhexeeya baaskiil-waynta iyo adiga ee khuseeya mawduuca halkan, waxaana lagu beddeli karaa oo keliya wax ka beddel qoraal ah oo uu saxeexay fulinta la oggol yahay ee baaskiil-waynta, ama ku dhejinta baaskiilka nooc dib loo eegay. Marka laga reebo ilaa xadka sharciga lagu dabaqi karo, haddii uu jiro, si kale u bixiyo, heshiiskan, gelitaanka ama isticmaalka Mareegta waxaa maamuli doona sharciyada gobolka California, USA, marka laga reebo qodobbada sharciga ee khilaafsan, iyo goobta ku habboon khilaaf kasta oo ka dhasha ama la xidhiidha mid kasta oo isku mid ah waxay noqon doonaan maxkamadaha gobolka iyo federaalka ee ku yaal Degmada San Francisco, California. Marka laga reebo sheegashooyinka ku-meel-gaadhka ah ama gargaarka loo siman yahay ama sheegashooyinka ku saabsan xuquuqda hantida aqooneed (taas oo laga yaabo in la keeno maxkamad kasta oo awood u leh iyada oo aan la dhejin dammaanad), khilaaf kasta oo ka dhasha heshiiskan ayaa ugu dambeyntii lagu xallin doonaa si waafaqsan Xeerarka Dhexdhexaadinta Dhameystiran ee Adeegga Dhexdhexaadinta iyo Dhexdhexaadinta Garsoorka, Inc. Garqaadku wuxuu ka dhici doonaa San Francisco, California, luqadda Ingiriisiga, waxaana laga yaabaa in go'aanka dhexdhexaadinta lagu fuliyo maxkamad kasta. Kooxda jirta tallaabo kasta ama dacwad kasta oo lagu xoojinayo heshiiskan waxay xaq u yeelan doontaa kharashyada iyo kharashyada qareennada. Haddii qayb ka mid ah heshiiskan la qabto mid aan sax ahayn ama aan la dhaqan gelin, qaybtaas waxaa loo tarjumi doonaa ujeeddada asalka ah ee dhinacyada, qaybaha soo harayna waxay ahaan doonaan kuwo si buuxda u dhaqan gala. Ka dhaafida dhinac kasta oo ka mid ah shuruudaha ama shuruudaha heshiiskan ama jebintiisa, hal tusaale, kama dhaafi doono muddadaas ama shuruudaha ama jebinta ku xigta. Waxaad u dhiibi kartaa xuquuqdaada hoos yimaada heshiiskan qolo kasta oo ogolaata, oo ogolaata in lagu xukumo, shuruudaha iyo shuruudaha; baaskiilku wuxuu ku wareejin karaa xuquuqdiisa sida uu dhigayo heshiiskan shuruud la'aan. Heshiiskani waxa uu noqon doonaa mid dhaqan gal ah oo ka faa'iidaysan doona dhinacyada, kuwa beddelaya iyo hawlaha la oggol yahay.